Dhismaha/macdanta - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Waa maxay magaalada Smart
Codsiyada dhabta ah ee Smart City
Kamaradaha roobka da'aya waxay caawiyaan mashaariicda Smart City
Waa maxay kamaradaha loo isticmaalo dhismaha/macdanta
Iyada oo la adeegsanayo software-ka khariidaynta 3D, waxay si toos ah u cabbiri kartaa masaafada, dhererka, goobta, mugga iyo xogta kale ee qaabka 3D
Kormeerka iyo qorsheynta hawlgalka
Qaabka saxda ah ee 3D ee laga soo saaray kamaradaha qarsoon, maamulayaasha dhismaha / miinooyinka ayaa hadda si hufan u qaabayn kara una maamuli kara hawlgallada goobta iyagoo wada shaqayn ka wada kooxaha. Tani waa sababta oo ah waxay si sax ah u qiimeyn karaan mugga walxaha ay tahay in la soo saaro ama loo wareejiyo si waafaqsan qorshooyinka ama heerarka sharciga.
Qiimaynta ka hor iyo ka dib qodista ama qarxinta
Adigoo isticmaalaya kamaradaha qarsoon ee macdanta, waxaad soo saartaa dib-u-dhisyo 3D ah oo kharash-ku-ool ah oo la heli karo iyo moodooyinka dusha sare ee meelaha la qarxinayo ama la qodayo. Moodooyinkani waxay si sax ah u falanqeeyaan aagga la qodayo waxayna xisaabiyaan mugga la soo saarayo qarxinta kadib. Xogtan ayaa kuu ogolaanaysa inaad si fiican u maamusho agabka sida tirada baabuurta xamuulka ah ee loo baahan yahay. Isbarbardhigga sahannada la qaaday ka hor iyo ka dib qaraxa waxay u oggolaan doontaa in cabbirada si sax ah loo xisaabiyo. Tani waxay wanaajisaa qorsheynta qaraxyada mustaqbalka, dhimista qiimaha walxaha qarxa, waqtiga goobta iyo qodista.
Maxay tahay sababta loo isticmaalo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kamaradaha qarsoon ee dhismaha/macdanta
Mashquulka badan ee goobaha dhismaha iyo macdanta awgeed, badbaadada shaqaaluhu waa mudnaanta. Moodooyinka xallinta sare leh ee kaamirada qarsoon, waxaad kormeeri kartaa haddii kale ay adagtahay in la galo ama meelaha taraafikada sare ee goobta, adoon naftaada khatar gelin shaqaale kasta.
Aad u saxan
Moodooyinka 3D ee ay dhiseen kamaradaha qarsoon waxay ku gaadhaan saxnaanta darajada sahanka oo leh waqti yar, dad yar, iyo qalab yar.
Maareynta iyo hawlgelinta mashruuca waxaa lagu dhameyn karaa qaabka 3D iyada oo aan shaqada la tagin goobta si loo fuliyo hawlahan, taas oo aad u yareyn doonta kharashka.
Shaqo aad u badan ayaa lagu wareejiyay kombuyuutarka, taas oo si weyn u badbaadisay wakhtiga guud ee mashruuca oo dhan